Nassar – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Baahubali 2: The Conclusion (2017) Unicode US$39 million အကုန်အကျခံပြီးတင်ဆက်ထားတဲ. Baahubali2ဟာ IMDb မှာ Rating 9.1 အထိရရှိထားပါတယ်ဗျ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က Baahubali ရဲ.အဆက်ဖြစ်ပြီး Katappa က Baahubali ကို ဘာလို့ လုပ်ကြံရသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ.ပရိတ်သက်ကို ဆွဲဆန်.ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့ Baahubali ရဲ့ သားဖြစ်သူ က သူ့ရဲ့အမွေအနှစ် အစစ်အမှန်ကို သိရှိပြီးနောက်တော့ သူ.ရဲ. နေရာမှန်ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားပုံ ကို effect ကောင်းကောင်းတွေ သုံးပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို.ပရိတ်သတ်တွေ အကြိုက်တွေ.စေမဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Credit Review Zawgyi US$39 million အကုန္အက်ခံျပီးတင္ဆက္ထားတဲ. Baahubali2ဟာ IMDb မွာ Rating 9.1 အထိရရွိထားပါတယ္ဗ် ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က Baahubali ရဲ.အဆက္ျဖစ္ျပီး Katappa က Baahubali ကို ဘာလို႔ လုပ္ၾကံရသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းနဲ.ပရိတ္သက္ကို ဆြဲဆန္.ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကားမွာေတာ့ Baahubali ရဲ႕ သားျဖစ္သူ က သူ႔ရဲ႕အေမြအႏွစ္ အစစ္အမွန္ကို သိရွိျပီးေနာက္ေတာ့ သူ.ရဲ. ေနရာမွန္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ဖို႔ ...
IMDB: 8.3/10 67,106 votes
Baahubali: The Beginning (2015) Unicode IMDb Rating (8.8/10) ထိရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, History အမျိုးအစား Bollywood ရာဇဝင်ဇာတ်ကားပါ။ရှေးခေတ်အိန္ဒိယတိုင်းပြည် က အင်အားကြီးဘုရင်တွေနဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖော်ကျူးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ရှီဗာဆိုတဲ့ မွေး ကင်းစကလေးငယ်လေးနဲ့ သူ့ရဲ့ အထိန်းတော်ဖြစ်သူတို့ကို ဘုရင့် မှူးမတ်တွေက လိုက်ပြီးတော့ သုတ်သင်ပါတယ်။ ထွက်ပြေးရင်း လမ်းခုလတ်အရောက်မှာ သူ့ရဲ့ အထိန်းတော်ဖြစ်သူက ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပြီး ရှီဗာဆိုတဲ့ ကလေးလေးကို ဒေသခံရွာသားတွေက စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှီဗာ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာ တဲ့အခါ တခြားလူငယ်တွေနဲ့မတူ ဘဲ သန်မာပြီးရဲရင့်တဲ့လူငယ်တစ် ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ သူကြီး ပြင်းခဲ့တဲ့ရွာနဲ့ မနီးမဝေး တောင် ပေါ်မှာ ရှေးဟောင်းဘုရင့် တိုင်း ပြည်တစ်ခုရှိပြီး အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဘုရင်မတစ် ပါးရှိတယ်။ တစ်ရက်မှာ ရှီဗာက တောင်ပေါ်တက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း အရမ်းလှတဲ့ အမျိုးသမီး တစ် ယောက်ကို ...
IMDB: 8.1/10 94,499 votes